माओवादीका कमाण्डर थिए पुकार तर सहिद भएपछि सम्झियो कांग्रेसले भाई केशर भन्छन् सहिद के का लागि ? - नयाँपुल अनलाइन डटकम
प्रकाशित मिति : Wednesday, February 10, 2021 nayapulonline
२०५७ साल देखि जनयुद्धमा हामिएर २०६० सालमा साहदत प्राप्त गरेका, हालको गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं. ५, तथा साविकको नामाडीस्थित चित्रे घर भए सहिद शहिद बिष्णु कार्की ‘पुकार’ को स्मृतिमा आयोजित खुल्ला पुरुष भलिवल प्रतियोगिता माघ २५ गते देखि जारी छ । फागुन १ गते तथा तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५१ सालमा जनयुद्ध घोषणा गरेकै दिन सो प्रतियोगिताको फाइनल खेल आयोजना हुने तालिका छ ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने टोलीले ३० हजार, द्धितिय हुने टालीलाई २० हजार र तृतिय हुने टोलीलाई १० हजार नगद, शिल्ड, मेडल र प्रमाण पत्र प्रदान गरिने छ ।
विशेषगरि , नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सहिद पुकारका भाई केशर कार्की सो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न लागि परेका छन् । दाजु सहिद भए पनि सम्बन्धित पार्टीले सहिदका परिवार विर्सिएको र नेपाली जनताले अझै दुख पाइरहेको भन्दै केशर बेलाबखतमा गुनासो पनि गर्दछन् । अनि, अरुले विर्सिए पनि नेपाली कांग्रेस र यो पार्टीका नेताहरुको सहयोगले एउटा प्रतियोगिता गराएर कम्तिामा सहिद पुकारलाई फेरि स्मरणमा ल्याउन पाउँदा केशरसहित सम्पूर्ण परिवार यतिखेर खुशि छ ।
सो प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा तरुण दल रामेछापका अध्यक्ष काजी बहादुर खड्काले पनि सहिदको नामबाट खेलकुद आयोजना हुनु र यूवाहरुको प्रतिभा मैदानमा देखिनु नै ठूलो विषय भएको धारणा राखे ।
यूवा अभियन्ता सुमन खड्का, सहिद कुनै पार्टीको हुन्न बरु देशको लागि हुन्छ र अरुले सहिदलाई विर्सिए पनि नेपाली कांग्रेसले सम्झिएकाले आफूलाई खुशि लागेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
को हुन् पुकार र सहिद कसरी भए ?
जनयुद्धका शहिद बिष्णु कार्की ‘पुकार’, जो २०६० साल माघ २५ गते तत्कालिन शाही नेपाली सेना बाट मारिए । उनको जन्म विक्रम सम्वत २०२० सालमा हालको गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं. ५, तथा सविकको नामाडीको चित्रे भन्ने स्थानमामा भएको थियोे ।
देशमा आमूल परिवर्तन र जनताको हितका लागि लोकप्रिय नारा लगाउदै २०५७ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीमा आवद्ध भएको ३ बर्षमा उनले साहदत प्राप्त गरे । यसले पुरकारको परिवारमा जिवनभरलाई पुग्ने पिडा दियो । आज पनि उहि साहसिक र कमर्ठ पुकारलाई सम्झेर परिवारजनमा शोक र पिडा छाइरहन्छ ।
पुकार १७ औं बटालियनका मुख्य कमाण्डर थिए । उनका सहयोद्धाहरु माझ उनी साह«ै मिजाशिला र साहसिक मानिन्थे । उनी जनयुद्धमा हामिए पछि एकदुई पटक मात्र घर आएको सम्झन्छन्, उनका भाई केशर कार्की ।
पुकारले देशको लागि सहित हुँदा, उनका भाई केशर कार्की भने रोजगारीको शिलशिलमा भारतमा थिए । २०६० सालमा दाई शहिद भएको, उनले भारतमै थाहा पाए । दाई शाही नेपाली सेनाको आक्रमणमा माघ महिनामा बित्नु भएछ तर हामी परिवारले भने चैत्रमा मात्र थाहा पायौं, उनले भने ।
पुकार शहिद भएपछि सरकारबाट पाएको रकम अझै सुरक्षित छ, त्यसमा थप सहयोग जुटाएर पुकार स्मृति पार्क र सालिक बनाउने परिवारको योजना पनि छ । ०००